Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ndị njem nlegharị anya nke Israel rutere na Tanzania na ọtụtụ ihe ga -abịa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ndị njem nlegharị anya nke Israel na -agbadata na Tanzania
Enwere ndị njem nlegharị anya Israel 150 bịarutere Tanzania n'izu a maka nchekwa anụ ọhịa. Otu a nwere ndị ọrụ njem 15 na ndị na -ese njem nlegharị anya si ala nsọ nke Israel nke Israel.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania na -ele otu ndị njem a anya dị ka mgbanwe iji weghachite ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi kemgbe ọrịa ọjọọ.
Ndị njem nlegharị anya nke Israel na -ahọrọ ileta ogige anụ ọhịa mgbe ha na -eme ezumike, na -akwụsị na Ngorongoro, Tarangire, Serengeti, na Mt. Kilimanjaro.
Tanzania nwere olile anya na nke a na -egosi mmeghe nke njem nlegharị anya n'Africa ma na -achọ ahịa isi mmalite ndị ọzọ ga -eso, dịka Europe na US.
Ndị njem ahụ bụ akụkụ nke ihe dị ka ndị njem nlegharị anya 1,000 si Israel bụ ndị a na -atụ anya na ha ga -aga Tanzania n'ọnwa a. Tanzania so na mba ndị Afrịka na -adọta ndị njem nlegharị anya Israel bụ ndị na -ahọrọkarị ịgagharị ogige anụ ọhịa na agwaetiti Zanzibar nke Oke Osimiri India.
N'ime afọ ole na ole, Israel gbabara n'ọkwa nke isii nke ahịa isi mmalite njem nlegharị anya maka Tanzania tupu ntiwapụ nke ụwa. Ọgbaghara covid-19.
Maazị Shlomo Carmel, onye isi na onye guzobere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa ọzọ na Israel, kwuru na ụlọ ọrụ ya ga -ahazi ụgbọ elu maka ndị njem nleta Israel. gaa Tanzania kwa afọ. Tanzania so na mpaghara Africa nke ụlọ ọrụ ahụ na -ere ahịa iji dọta ndị njem si Israel, Europe, America, na ahịa isi mmalite ndị njem n'ofe ụwa.
Onye bụbu Mịnịsta ala Israel, Ehud Barak, gara Tanzania afọ ole na ole gara aga, na -egosi mmeghe ọnụ ụzọ njem maka ndị ọzọ na -eme ezumike Izrel ịga leta ebe nlegharị anya Africa a.